ဩဂုတျ ၃၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၇ ညနေ News Code : 1175341 Source : ABNA Link:
ဤသို့ဖြစ်ပထမအရိပ်အမြွက် ပြုထားသည့် အတိုင်း မနုဿ လူသား အတွက် အလွန်တရာ အရေး အကြီးဆုံးမှာ အဲက်လ် (ခ) အသိဥာဏ် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး နည်းဖြင့် ၎င်း အဲက်လ် ကို ဆွတ်ခူးရပါမည်။ ၎င်းသည် လောကုတ္တရာ ဆိုင်ရာ ကံကောင်းပျော်ရွှင်မှု နှင့် အောင်မြင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်း မှာ ဤ လောကီ ဘဝ သည် လောကုတ္တရာ ထာဝရ ဘဝ၏ နိဒါန်း ဖြစ်ပါသည်။ မနုဿလူသား၏ ပမာသည် ဤလောကီ တွင် လောကုတ္တရာ အတွက် ခရီးသည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နယ် တစ်ကျေး တွင် နေ့ည အလုပ်ကြိုးစားပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ် ကာ မိမိ၏ ရရှိမှု ကို စုဆောင်းမည်။ ပြီးနောက် ၎င်း အား မိမိ၏ နေရပ်ဌာနေ မိမိ၏ အိမ် သို့ ပို့ပြီး မိမိအတွက် အိမ်တစ်လုံး ၊ တည်နေရာ နှင့် အရင်းအနှီး ကို စီစဉ်ပါသည် ထိုမှသာ မိမိ ဇာတိမြေ ၊ နေရပ်ဌာနသို့ မပြန်မည် အလျင် ပို့ထားသည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ နှင့် အသုံးအဆောင်များ ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိဘဝ ၏ ကျန်ရှိနေသည့် ရက်များ အေးဆေးစွာ သိက္ခာရှိ ရှိ ဂုဏ်ရှိရှိ ဖြင့် ကျော် ဖြတ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကွာခြားချက်မှ္ပာ လောကီ ဘဝသည် ကန့်သတ် ချက် ရှိပြီး ပျက်စီးမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လောကုတ္တရာ (ခ) တမလွန် ဘဝ သည် ထာဝရ ဖြစ်ပြီး အမြဲ နေရမည့် နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
မနုဿ လူသား၏ ယုံကြည်ချက်များ နှင့် ပြုလုပ်မှု များသည် ဤလောကတွင် မနုဿ လူသား၏ လက်ဖြင့် မျိုးစေ့ ချပါသည်။ ပြီးနောက် လောကုတ္တရာ တွင် ၎င်း၏ရလာဒ် နှင့် အဖြေ ထင်ရှားစွာ ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလောကီ ဘဝ တွင် အကယ်၍ မည်သည့် လယ်သမား မဆို ကျွမ်းကျင်သည့် စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင် ၏ လမ်းညွှန် ချက်များ ကို အခြေခွပြီး မျိုးစေံ ချ မည်ဆိုလျင် ရိတ်သိမ်းချိန် တွင် အကောင်းတကာ အကောင်းဆုံး အရည် အသွေး နှင့် အတူ မိမိ၏ အပင်ပန်းခံမှုများ ၏ အမြောက်အများ ရလာဒ် နှင့် အဖြေ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနည်း အတိုင်း အကယ်၍ မနုဿ လူသားများ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ယုံကြည်ချက်များ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ လမ်းညွှန် ဆုံးမမှုများ နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက် သွာဟေရီးန် (အ.စ) ၏ ပညာရပ်များ အသိပညာများကို အခြေခံပြီး စီစဉ် လုပ်ဆောင်မည်။ မိမိ၏ တစ်ဦးတည်း နှင့်လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စ များ ကို ကုရ်အာန် ၏ လမ်းညွှန် ဆုံးမမှုများ ပေါ် အခြေခံပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်။ ထိုမှသာ လောကီ၏ သိက္ခာ နှင့် ဂုဏ် အပြင် လောကုတ္တရာ တွင်လည်း မိမိ၏ ကောင်းမြတ်သည့် လုပ်ရပ်များ ၏ ရလာဒ်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရပါမည်။ မိမိ၏ ကောင်းမြတ်သည့် လုပ်ရပ်များ ကြောင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ရဲဟ်မသ်တော် အနီး တွင် သာယာ ပျော်ရွှင်သူ ၊ကံကောင်းသူ အဖြစ် တွေ့မြင်ရ၍ ပျော်ရွှင်ပေမည်။
အမီးရွလ်မိုအ်မေနီ ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ ကို အလွန်တရာ လှပ သည့် ဥပမာ ပေး၍ မိန့်တော် မူပါသည်။ မနုဿလူသားများ အား ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အပေါ် လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် နှင့် ၎င်းကျမ်း တော်မြတ်၏ ဘဝ ရှင်သန်မှုကို ပေးသည့် ဥပဒေများ ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လိုက်နာ ရန် ဖိတ်ခေါ် မှု ပြုထားပါသည်။
فَاسْئَلُوا اللّٰهَ بِهِ وَ تَوَجَّهُوالیهِ بِحُبِّهِ وَ لاتَسْئَلُوْا بِهِ خَلْقَهُ إنّهُ مَا تَوَجَّهَ العِبَادُ اِلٰی اللّٰهِ بِمِثْلِهِ وَ اعْلَمُوْا إنّهُ شَافِع وَ مُشَفَّع وَ قَائِل مُصَدِّق وَ أَنَّهُ مَن شَفَعَ لَهُ الْقُرآنُ یَومَ الْقِیَامَةِ شُفِّعَ فِیهِ وَ مَن مَّحَلَ بِهِ الْقُرآنُ یَومَ الْقِیَامَةِ صُدِّقَ عَلَیهِ.
အဓိပ္ပာယ်။ ။ ဟဇရသ် အေမာမ်အလီ (အ.စ) ပြီးသွားအကြောင်းအရာများကို မိန့် ကြားပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သည် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း တွင် အကြီး တကာ အကြီး ဆုံး နာကျင်မှု နှင့် ဝေဒနာ အတွက် ကုထုံး ဖြစ်ပါသည်။ မနုဿ လူသားများ အား ဆုံးမ သွန်သင်မိန့်ကြား တော်မူပါသည်။ ((ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အား အကြောင်းပြုပြီး အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ထံ တောင်းဆိုပါလေ။ ၎င်း၏အချစ် မေတ္တာ ကို အကြောင်း ပြုပြီး ၎င်း ဘက်သို့ ဦးလှည့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အခြားသူများထံ မှ အကူအညီ အဖေးအမ ယူရန် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အား အကြောင်း ခံအဖြစ် မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်ဘက် အာရုံပြု နိုင်ရန် ကုရ်အာန်ကဲ့သို့ မည်သည့် ဝစီလာ (ခ) အကြောင်းခံ မရှိချေ။ပြီးနောက် သတိရှိပါလေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သည် ရှဖာအသ် (ခ) အသနားခံ လျှောက်ထားမည့်သူ ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ရှဖာအသ် ကို အရှင်မြတ် လက်ခံ တော်မူ ပေမည်။ ပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သည် ပြော ကြားသူ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ပြေကြားချက် သည် အရှင်မြတ် ထောက်ခံပြီးသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူအတွက်ပင်ဖြစ်စေ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အနေဖြင့် ကေယာမသ်နေ့ တွင် ရှဖာအသ် (ခ) အသနား ခံပေမည်ဆိုလျှင် အတောင်း ခံပေးရသူအတွက် ရှဖာအသ် အား အရှင်မြတ် လက်ခံပေးတော်မူမည်။ မည်သူ မဆို၏ အပြစ်အနာအဆာ ကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အနေဖြင့် ကေယာမသ်နေ့ တွင် လျှောက်ထားမည်ဆိုလျှင် ၎င်း၏ အပြစ်အနာအဆာ အား အရှင်မြတ် အတည်ပြု တော်မူ ပေမည်။))
ပြီးနောက် ဟဇရသ် အေမာမ် အလီ (အ.စ) အနေဖြင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် မနုဿလူသားများ ကွဲကွာခြင်း ၏ အန္တရာယ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိန့်တော်သည်။ ပြီးနောက် ကောင်းကင်ကျကျမ်း ၏ နောက်လိုက်ရန် ၎င်းအား အတွေး နေရာ ၌ ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်နေရာတွင် ဖြစ်စေ စံနမူနာ မှတ်ကျောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ဖိတ်ခေါ် ထားပါ သည်။
یُنَادِی مُنَادٍ یَومَ الْقِیَامَةِ أَلاَ إنّ کُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلیٰ فِی حَرثِهِ وَ عَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَیرَ حَرَثَةِ القُرآنِ فَکُونُوا مِن حَرَثَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَ اسْتَدِلُّوهُ عَلٰی رَبِّکُم وَ اسْتَنْصِحُوهُ عَلٰیٰ أَنْفُسِکُمْ وَ اتَّهِمُوْا عَلَیهِ آرَائَکُمْ وَاسْتَغِشُّوْا فِیهِ أَهْوَائَکُمْ.
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ကေယာမသ် ဖြစ်သည့်အချိန်ပြီး နောက် အဖန်ဆင်းခံ များ စာရင်း အင်းရှင်းရန် နှင့် ဆုလာဒ် နှင့်ပြစ်ဒဏ် အတွက် မတ်တပ်ရပ်နေကြမည်ထိုအချိန် ကြေညာ သူတစ် ယောက်မှ အသံပေးမည်။ ကေယာမသ်သူ ၊ကေယာမသ်သားများ ကို ဤ အမှန်တရား နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းပေးမည်။ (အို လူထုအပေါင်းတို့ သတိရှိကြပါလေ။ ယနေ့ လယ်ယာလုပ်သူတိုင်း မိမိတို့ လယ်ယာ နှင့် မိမိတို့ လုပ်ရပ်၏ အာနိသင်များ နှင့် ရလာဒ်များ ၊ အကျိုး ဆက်များ ကိုခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အကြင်မည်သူမါမိမိ၏ နှလုံးသားတွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ မျိုးစေ့ ကို စိုက်မည် ဆိုလိုသည်မှာ လောကီ တွင် မိမိ ၏ ယုံကြည်ချက်များ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ ဥပဒေများ နှင့် သွန်သင်ညွှန်ကြားချက်များ ကို အခြေပြုပြီး ရပ်တည်သူများသာလျှင် အောင်မြင် သူများ ဖြစ်ကြပါ မည်။ ဤအတွက်ကြောင့် အသင်တို့ အနေဖြင့် ၎င်းလူများနှင့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် နောက်လိုက်သူများ တွင် ပါဝင်ပါလေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အား အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ရှေ့ တော်တွင် လမ်းပြသူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်း ကျမ်းတော် မြတ် ကုရ်အာန် မှ မိမိတို့၏ စိတ်များ ၊ဝိညာဉ်များကို ဆုံးမသွန်သင်ပါ။ မိမိတို့၏ စိတ်ကူး တင်မြင်ယူဆချက်များ ကို စွပ်စွဲမှု ဟုသတ်မှတ်ပါ။ ပြီးနောက် မိမိတို့ ၏ စိတ် အလို ဆန္ဒများ ကို လှည့်ဖျားမှု ဟုထင်မြင်ပါလေ။
မနုဿ လူသားများအပါအဝင် အဖန်ဆင်းခံများ ၏ဘဝ နှင့် ရှင်သန်မှုသည်သတ်မှတ် ကန့်သားထားသည့် အမိန့်ရှိပါသည်။ ဤဘဝသည် အထူးကာလ တစ်ကာလ ၊အစက် တစ်စက် ကနေ (ခ) မွေးဖွားချိန် မှ စတင်ပါသည်။ ပြီးနောက် အထူးကာလ တစ် ကာလ အစက် တစ်စက် တွင် သေခြင်းဆိုသည့် အကြောင်းခံဖြင့် ပြီးဆုံးသွားပါသည်။ မနုဿ လူသား သည် ဤသတ်မှတ် ကန့်သတ်ထားသည်ကာလအတွင်း အဆက် မဖြတ်လှုပ်ရှားမှု ရှိသည် ၊ ရှိခဲ့သည် ဆိုသည့် အခြေအနေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ပြီးနောက် ပင်ကိုယ်စရိုက် ပုံစံ အမျိုးမျိုး နှင့် အသွန် အစုံစုံ ရှိပါသည်။ မနုဿ လူသား ပင်ကိုယ် စရိုက်သည် ၎င်း၏ယုံကြည်ချက်များ နှင့် အမြင်များ ပုံပေါ်ပြီးထွက်လာပါသည်။ ၎င်း၏ လုပ်ရပ်များ နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား များ ၏ ရင်းမြစ် ဖြစ်ပါသည်။ မနုဿ လူသား၏ လုပ်ရပ်များနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားများသည် လည်းပဲ ကေယာမသ်နေ့ တွင် ကိုယ်ထည်များဖြစ်သွားကြမည်။ ယောက်တိုင်း ယောင်တိုင်း မိမိတို့ လုပ်ရပ်များ မိမိတို့၏ လုပ်ရပ်များ ၏ အကျိုး အာနိ သင်များ နှင့် ရလာဒ် များ ကို ကြည့်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
‍ ဤနေရာတွင် ဂရုပြုသင့်သည့် ပွိုင့် တစ်ခု မှာ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် ဤလောကကြီးမှ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်အမိန့်တော် မခံယူမည် အလျှင် အချိန်တိုင်းမိမိ၏ ယုံကြည်ချက်များ ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား (ခ) စာရိတ္တ အား စိစစ်မှုပြုပြီး မိမိ၏ အတိတ်၏ အကြွေး (ငွေ ၊အလုပ် စသည်ဖြင့် ) များ ဆပ်နိုင်ပါသည်။ မှားယွင်း မှုများ ကို ပြုပြင် တည်းမတ် အောင်ပြု နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ ကံအား လောကီ နှင့် လောကုတ္တရာ ၏ ကံကောင်း ပျှော်ရွှင် မှု ၊ အောင်မြင်မှု ဘက်သို့ လှည့်ပေး နိုင်ပါသည်။ တခဏ တာ အတွင်း ပြုပြင်ထိန်း နိုင်သူ များလည်း အမြောက်အများ ရှိပါသည်။ ပြီးနောက် စစ်မှန်သည့် သောင်ဗာဟ် (ခ) ဝန်ချ တောင်းပန်သည်မှုဖြင့် မိမိ၏ အတိတ်၏ အမှောင် ကို အနာဂတ် ၏ ကံကောင်းပျော်ရွှင်မှု ဆိုသည့် အလင်း ရောင် နှင့် ပြောင်း နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုပြင် ထောင် ပေါင်းများ စွာသောသွားရသည့်လမ်းအား တစ်ညတည်းနှင့် ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ ကြပါ သည်။ သို့သော် ဤအချက်ကို လည်း ဂရုပြုရပါမည်။ အတိတ်ကို စိစစ်ခြင်း ၊ ပြန်လည်ဆပ်ခြင်း ပြုပြင်တည်းမတ်ခြင်း နှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းသည့် ဤလောကီ တွင်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤ ဖျက်စီးမည့် လောက မှထွက်ခွာပြီး ၊ သေဆုံး ပြီးနောက် ပြဲပင် တည်းမတ်ရန် ၊ ပြင်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။
အကယ်၍ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် လောကီ တွင် မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ အဲဟ်ကာမ်(ခ) ဥပဒေများ နှင့် သိရှိမှုများ ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်မည် ပြီးနောက် ဟဇရသ် အလီ (အ.စ) မိန့်ကြားချက်အရ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ကို အခြေခံပြီး စိုက်ပျိုးထားသူ (ခ) ဆောင်ရွက် ထားသူဆိုလျှင် လောကုတ္တရာ တွင် ၎င်း ဆောက်ရွက်မှု (ခ) စိုက်ပျိုးမှု ၏ အာနိသင်များ နှင့် ရလာဒ် ၏ အကျိုးကို ခံစားရပါမည်၊ ပျော်ရွှင်ရပါမည်။ လုပ်ဆောင်မှု နှင့် ပြုပြင်တည်းမတ်ခြင်း ၏ အခွင့်အလမ်း မှာ ဤလောကတွင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လောကုတ္တရာ သည် ပြုပြင် တည်းမတ် ရန် နှင့် ပြင်ဆင် ရမည့် နေရာမဟုတ်ချေ။
اَلْیَومَ عَمَل وَ لاحِسَاب وَ غَداً حِسَاب وَ لاعَمَل .
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ယနေ့ လုပ်ဆောင်မှု အတွက် ဖြစ်ပြီး စာရင်းအင်း ရှင်းရန် အတွက် မဟုတ်ချေ။ မနက်ဖန်သည်စာရင်းအင်းရှင်း ရမည့်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်မှု အတွက် မဟုတ်ချေ။
လောကီ နှင့် လောကုတ္တရာ နှစ်ဌာန ၏ အမှန်တကယ် အာလင်မ် ဖြစ်သည့် အမီးရွလ်မိုအ်မေနီဟဇရသ် အလီ (အ.စ) သည် လောကီလောကုတ္တရာ အကြား ဆက်သွယ်မှု ကို သိရှိသူ ၊ မွတ်စလင်မ်များ၏ ကောင်းကျိုးကို လိုလား ပြီး ကိုယ်ကျင်စာ တရား ထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော် (အ.စ) မှ မိန့်တော် မူသည်။
فَکُوْنُوْا مِنْ حَرَثَةِ الْقُرآن .
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ အကယ်၍ ကံကောင်းပျော်ရွှင်မှု ကို လိုလားသူဆိုလျှင် မိမိ၏ လယ်ပြင် တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်များ နှင့် အညီ စိုက်ပျိုး ရပါမည်။ (ခ) မိမိဘဝကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် အညီ တည်ဆောက်ရပါမည်။ကောင်းကင်ကျကျမ်း ၏ ရှင်သန်မှု ကို ပေးနေသည့် ဥပဒေများ နှင့်ဆုံးမလမ်းညွှန်မှု များ အပေါ် လိုက်တွေ့ လိုက်နာသူ နှင့် မိမိ၏ လောကီ အား လောကုတ္တရာ အတွက် ရှင်သန်သူ များတွင် ပါဝင်အောင်ပြုပါလေ။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အား စံမှတ်ကျောက် နမူနာ အဖြစ် သတ်မှတ်ရပါမည်။ ထိုမှသာ မည်သည့်အခါမှ မဆုံးရှုံးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်မှု ၏ လှိူ့ဝှက်ချက် နှင့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ အခန်း ကဏ္ဍ
မည်သည့် အစီအစဉ် ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း နှင့် ဗျူဟာ အောင်မြင်ရန် အတွက် အထူးသဖြင့် သွန်သင်ချက် ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့်် လူမှုရေး ကိစ္စများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းချက် သုံးခု အပေါ် အခြေခံထားရန် အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင် ရပါသည်။
၁။လိုချင်သည့် ပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူး အောင်မြင်နိုင်ရန် အစီအစဉ်၏ မှန်ကန် မှု နှင့်တိကျမှု
၂။ အစီအစဉ် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည် ထားရန်
၃။ အစီအစဉ် တွင် ချမှတ် ထားသည့် စည်းမျည်း စည်းကမ်း များ ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် မူတည်၍ လုပ်ဆောင်ရန်
ရှင်းလင်းပါသည်။အကယ်၍ ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သုံးချက် မှ တစ်ချက် ချက် မပါဝင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် အစီအစဉ်နှင့် ညွှန်ကြားမှု အကျိုးသက်ရောက်မှု မှာ လိုသလို ထင် ရှားမည် မဟုတ်သလို ရည်ရွယ်ချက်သည်လည်း အောင်မြင် မည်မဟုတ်ချေ။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မွတ်စလင်မ်များ ၏ ဘဝလမ်းညွှန် ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ပြောကြပါသည်။သို့သော် ဤအချက်ကို နှုတ်နှင့်ပြောခြင်း အပြင်ပိုင်း အရ ဝန်ခံ ယုံနှင့် မလုံလောက်ချေ။အပြင်ပိုင်းအရ ဝန်ခံ သည် အခြေအနေတွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် ၎င်းကျမ်းမြတ် ၏ ရှင်သန်မှုကို ပေးဆောင်သည့် ဥပဒေသများ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်မှု သည် နှလုံးတွင် ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည် မှုရှိမှသာလျှင် စာရင်း ဝင်ပါမည်။ ပြီးနောက် မနုဿ လူသား ၏ ဝိညာဉ် နှင့်နှလုံးသား မှ နက်နက်နဲနဲ ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် ရှင်သန်မှု ကို ပေးဆောင်နေသည့် ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် ဆိုဆုံးမ လမ်းညွှန်ချက်များ အပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်ရမည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ မိန့်ကြားချက်များ နှင့် သတင်းစကားများ ၏ရှေ့ တော်မှောက်တွင် ဦးညွှတ်ရပါမည်။ ဤ ကဲ့သို့သော် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ၊ ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်ချက် ရှိမှသာလျှင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ဆိုဆုံးမမှု ၏ အကျိုး ကျေးဇူး ဖြစ်ပေါ်ထွန်းမှု ၊ကျမ်း တော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ ရှင်သန်မှုပေးကို ပေးနေသည့် ဥပဒေသများ နှင့် လမ်းညွှန် မှုများ အပေါ် အခြေခံပြီး လက်တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး မှုသည် အကောင်အထည် ဖော်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် မိန့်ကြားတော်မူသည်။
ذلِکَ الْکِتَابُ لارَیبَ فِیهِ هُدیً لِلمُتَّقِینَ. الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّارَزَقنٰهُم یُنفِقُونَ . وَ الَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَالیکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبلِکَ وَ بِالآخِرَ ةِ هُم یُوقِنُونَ . أُولٰئِکَ عَلٰی هُدیً مِن رَّبِّهِم وَ أُولٰئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ.
အဓိပ္ပာယ် ။ ။ ဤကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် တွင် မည်သည့် သံသယ ဝင်မှုမျှ မပြုနိုင်ချေ။ ဤကျမ်းသည် သက္က်ဝါး (ခ) သီလ၊သမာဓိရှိသူများ မကောင်းမှု ကိုရှောင်ကြဉ် သူများ အတွက် လမ်းညွှန် ဖြစ်ပါသည်။ အကြင်မည်သူမဆို အကွယ် အပေါ် သက်ဝင် ယုံကြည် မည်၊ နမာဇ် အား စွဲစွဲ မြဲမြဲ ဝတ်ပြု ပါသည်။ အရှင်မြတ်ပေးထားသည့် စားနပ် ရိက္ခာ များမှ အရှင်မြတ် ၏လမ်း တွင် သုံးစွဲပါသည်။ ထိုပြင် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ် အရှင်မြတ် အနေဖြင့် အသင် (မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ) အပေါ် နှင့် အသင် ထက်အလျှင် ရှိသူများ အပေါ် သို့ ချပေး တော်မူသည့် အရာများ အားလုံး အပေါ် သက်ဝင် ယုံကြည် ကြပါသည်။ ပြီးနောက် လောကုတ္တရာ ကိုလည်း ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်ပါသည်။ ဤသူများသည်သာလျှင် မိမိတို့ ၏ ဖန်ဆင်း မွေးမြူတော်မူသည့်ဘက်မှလမ်းညွှန်မှု ရရှိ ထား သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အောင်မြင် သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
သို့သော်လည်း ဤအချက်ကို ဂရုပြုရပါမည်။ အီမာန် (ခ) သက်ဝင်ယုံကြည်မှု အဆင့် အမြောက်အများ ရှိပါသည်။ အစ္စလာမ်မီ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူများ မှ (စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ် တရားတော် အရ အုပ်ချုပ်သည့် ) အစိုးရ နှင့် ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန် ၏ ဥပဒေများ နျင့် လမ်းညွှန် ချက်များ အပေါ် နှလုံး သည်းပွတ်မှ သက်ဝင် ယုံကြည်မှု ရှိသည့် အခြေအနေ တွင် မိမိတို့၏ အခက် အခဲများ အပေါ် ထိန်းချုပ် နိုင်ပါမည်။ပြီးနောက် ရန်သူများ ကို လွမ်းမိုးနိုင်ပြီး ဂုဏ် သိက္ခာ နှင့် ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်၏ မျှော်လင့်ချက် နှင့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၏ စကား လုံးများတွင် လောကီ ၊လောကုတ္တရာ ၏ အောင်မြင်မှု ၏ မျှော်လင့်ချက် ထားနိုင် မည်ဖြစ် ပါသည်။ သာသနာ နှင့် မနုဿများ ၏ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု သည် စကားအချို့ အသုံးပြုခြင်း ယုတ်စွ ရာထူး ရရန်အတွက် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည် ထင်ပေါ်အောင်ပြုယုံ မဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အနေဖြင့် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ အဲဟ်ကာမ် (ခ) ဥပဒေ သများ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ အပေါ် အီမာန်(ခ) သက်ဝင်ယုံကြည်မှု မရှိသူများ၊ မွတ်စလင်မ်များ ကို လှည့်စားရန် သာပြုနေသူများ မိမိတို့၏ လောကီ ရည်ရွယ်ချက်များ အထိရောက်ရှိရန် အီမာန် (ခ) သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ကို ရုပ်ပြသူများ ကို မိုနာဖေက် (ခ) အရေးခြုံ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ဤအုပ်စု ၏ အပြင်ပိုင်း ၊ အတွင်းပိုင်း နှင့်လုပ်ဆောင်ချက် ဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ ကို ကျမ်းတော်မြတ်၏ မြောက်များ စွာသော အာယသ်တော်များ မှ မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုသည့်ပွိုင့် မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ၏ ဥပဒေသများ နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် အခြေခံ ၍ ဘဝတည်ဆောက်မည် ပြီးနောက် ဤ ကောင်းကင်ကျ ကျမ်းမြတ် သည် ကျွန်ုပ်တို့ အား ကံကောင်းပျော်ရွှင်သူများ ဖြစ်အောင် ပြုစေလိုလျှင် ရှိသမျှ လူများအားလုံး အထူးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဘာသာရေး ကိစ္စများဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အပေါ် အီမာန်(ခ)သက်ဝင်ယုံကြည် ပြီး ဟဇရသ် အီဗရာဟီးမ် (အ.စ) ပမာ ဤ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ ကျမ်းတော်မြတ် ရှေ့ တွင် အပြည့်အဝ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရပါမည်။ ဆိုလို သည်မှာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ ရှင်သန်မှု ကို ပေးသည့် ဥပဒေသများ နှင့် လမ်းညွှန် ချက် များကို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်များ ၊ စောဒကတက်မှုများ မပြုဘဲ လက်ခံ သဘောတူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဗေဟာရွလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း ၊ အတွဲ ၃၂ ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၄
စူရဟ် ဘက္က်ရာ ၊ အာယသ်တော်အမှတ် ၂ မှ ၅